Izinhlobo Ezi-7 Zobuhlungu be-Fibromyalgia [Konke Mayelana nobuhlungu obuhlukile be-Fibromyalgia]
Izinhlobo ezi-7 zeFibromyalgia Pain
06 / 03 / 2019 /Amazwana we-0/i fibromyalgia/av olimalayo
I-Fibromyalgia ukuxilongwa kobuhlungu obuthambile be-rheumatic okunganikeza isisekelo sezinhlobo eziningi ezahlukene zobuhlungu. Abantu abaningi ababoni ukuthi lezi zivame ukuhlukaniswa ngokuhlukahluka okuhlukahlukene. Nazi izinhlobo ezi-7 zobuhlungu be-fibromyalgia okufanele uzazi.
E-fibromyalgia eminingi yalezi zinhlungu ingadlula futhi isithombe sobuhlungu siyehluka kakhulu. Lapha sidlula ezigabeni eziyisikhombisa zobuhlungu be-fibromyalgia ukuze ufunde kabanzi ngalezi. Uma umngani noma ilunga lomndeni line-fibromyalgia khona-ke le ndatshana ingakusiza uqonde kabanzi ngokuthi lokhu kutholwa yinkimbinkimbi kubathinta kanjani.
Silwela ukuthi labo abanezinye izifo ezitholakala ebuhlungwini obungapheli kanye nezifo babe namathuba angcono okuthola ukwelashwa nokuhlolwa - into hhayi wonke umuntu avumelana nayo, ngeshwa. Njengathi ekhasini lethu le-FB og isiteshi sethu se-YouTube kwezokuxhumana ukuze uhlanganyele nathi ekulweni izimpilo zansuku zonke ezithuthukisiwe izinkulungwane zabantu.
Lo mbhalo uzodlula ezinhlotsheni eziyisikhombisa zobuhlungu be-fibromyalgia - Abanye babo ngokuqinisekile bazokumangaza. Ngezansi kwendatshana ungabuye ufunde imibono evela kwabanye abafundi futhi uthole izeluleko ezinhle.
Ngabe uyazibuza okuthile noma ufuna ezinye zokugcwalisa okunje ngochwepheshe? Silandele ekhasini lethu le-Facebook «Vondt.net - Siyabuqeda ubuhlungu bakho»Noma Isiteshi sethu se-YouTube (ivula ngesixhumanisi esisha) ukuthola izeluleko ezinhle zansuku zonke nolwazi oluwusizo lwezempilo.
I-Hyperalgesia yigama lezokwelapha lokuchazwa kobuhlungu obukhulayo obuzwayo uma une-fibromyalgia. 'Hyper' kusho ngaphezu kokujwayelekile futhi i- «algesia» iyafana ne- ubuhlungu.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi izingxenye ezithile zobuchopho zalabo abane-fibromyalgia zihumusha izimpawu zobuhlungu ngokuhlukile - nokuthi lezi zimpawu zihunyushwa ngevolumu ephezulu kakhulu. Lokho wukuthi, amasignali obuhlungu ahunyushwa ngokungeyikho futhi akhuliswa kakhulu.
Ngokufanelekile lesi ngesinye sezizathu esenza ukuthi labo abane-fibromyalgia bavame ukuzwa nobuhlungu obuqine obuvela emisipha yokulimala, izinzwa kanye nokuhlangana kwamalunga kunabanye. Ngenxa yalokhu, leli qembu leziguli libuye lincike kakhulu ekwelashweni ngokomzimba, nsuku zonke ukuhamba umzimba nokuqeqeshwa ngokwezifiso (njenge ukuqeqeshwa kweqembu echibini lamanzi ashisayo).
Funda kabanzi: - 5 Ukuzivocavoca umzimba kwalabo abane-Fibromyalgia
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi ngalezi zivivinyo zokuzivocavoca umzimba - noma bukela ividiyo engezansi.
I-VIDEO: Ukuzivocavoca okuhamba nge-5 kwalabo abane-Fibromyalgia
Ukwazi ukuzivumelanisa nezimo zokuzivumelanisa nezimo ezivumelaniswa nalabo abane-fibromyalgia kubaluleke kakhulu. Ividiyo engezansi ikhombisa ukuvivinya umzimba okuhlanu okungakusiza ugcine ukuhamba, ukujikeleza kwegazi nokunciphisa izinhlungu.
Joyina umndeni wethu bese ubhalisela isiteshi sethu se-YouTube (chofoza lapha) ukuthola izeluleko zokuzivocavoca mahhala, izinhlelo zokuzivocavoca nolwazi lwempilo. Siyakwamukela!
2. Ubuhlungu be-Neuropathic
Abaningi abane-fibromyalgia bathinteka ebuhlungu be-neuropathic. Lolu hlobo lobuhlungu lungadala izimpawu ze-nerve ezingajwayelekile njengokubanga, ukushisa, ukulunywa, ukusindeka noma ukudonsa ezingalweni nasemilenzeni. Lezi zimpawu zingabuye zibe buhlungu ngqo.
Kunezindlela eziningi zokwelashwa ezingasiza ngobuhlungu obunjalo - kubandakanya nemithi. Ukwelashwa ngokomzimba, ukuhlangana ngokujwayelekile kanye ne-acupuncture izindlela zokwelapha ezingasiza ukusiza ukudambisa izinhlungu ze-neuropathic.
Abantu abaningi banenkinga yobuhlungu obungapheli nezifo ezichitha impilo yansuku zonke - yingakho sikukhuthaza ukuba Yabelana ngale ndatshana kwabezindaba zenhlalo, Zizwe ukhululekile ukuthanda ikhasi lethu le-Facebook bese uthi, "Yebo ocwaningweni oluningi ngokuxilongwa kwezifo ezingalapheki".
Ngale ndlela, umuntu angenza izimpawu ezihambisana nalokhu kuxilongwa zibonakale futhi aqinisekise ukuthi abantu abaningi bathathwa ngokungathi sína - ngaleyo ndlela bathole usizo abaludingayo. Siyethemba futhi ukuthi ukunakwa okunjalo kungaholela ekuxhasweni ngemali enkulu kocwaningo ngezindlela ezintsha zokuhlola nokwelashwa.
Funda futhi: - Izimpawu ezi-15 zokuqala zeRheumatism
Ngabe uthintekile ekuhlaselweni i-rheumatism?
3. Ubuhlungu bekhanda be-Fibromyalgia
Labo abane-fibromyalgia bavame ukuba nekhanda elivela njalo. Eqinisweni, kujwayelekile kakhulu ukuthi leli qembu leziguli lithinteke kakhulu ikakhulukazi ebuhlungwini bekhanda (ikhanda lekhanda) kanye ne-migraines.
Lokhu kuhlotshaniswa nezici ezintathu kulabo abane-fibromyalgia:
Izinga lokulala elibi (ngenxa yobuhlungu basebusuku)
Izinzwa zobuhlungu ezisebenzayo
Ukukhathazeka kwengqondo (ubuhlungu obungapheli nokulala kabi kuhamba kahle - ngaphezu kwamandla engqondo)
Futhi, siyabona ukuthi isici esivamile kulezi zici ezintathu ukuzwela ngokweqile ngakho-ke ingqondo ihumusha izibonakaliso ngamandla amakhulu. Futhi kungenxa yalesi sici esiyinhloko ukuthi umuntu unethemba lokuthi ikhambi lesikhathi esizayo le-fibromyalgia lingamanga.
Funda futhi: - Kusiza Kanjani Ukuzivocavoca Emachibini Amanzi Ashisayo Ku-Fibromyalgia
4. Ubuhlungu besisu kanye ne-pelvic
Abantu abane-fibromyalgia basengozini ephezulu yokushaywa i-bowel syndrome. Lesi yisimo sokugaya esinezimpawu zokugqinlwa yisisu, igesi nesisu esinegazi. Ezinye izinkomba zifaka ukuqunjelwa, isifo sohudo, isicanucanu, umuzwa wesidingo sokukhandleka nezitulo ezingalingani.
I-Fibromyalgia ingakhulisa futhi ukwanda kwezihlungu zobuhlungu be-pelvic, womabili amalunga we-pelvic, kepha futhi ngokubhekise kwi-groin ne-pubic symphysis. Izimpawu zesici zingasho ukuchama kaningi futhi 'ukuchama' kaningi.
Kungakho kubaluleke kakhulu ukunamathela 'ekudleni kwe-fibromyalgia' futhi ulandele izeluleko zokudla kuzwelonke. Ku-athikili engezansi ungafunda ukuthi ucwaningo lucabangani njengokudla okungcono kakhulu kulabo abathinteka yi-fibromyalgia.
Funda futhi: - Umbiko Wocwaningo: Lesi yisidlo esihamba phambili seFibromyalgia
Chofoza esithombeni noma kusixhumanisi esingenhla ukuze ufunde kabanzi mayelana nokudla okulungile okuhunyushwe kulabo abane-fibro.
Funda futhi: Okufanele Ukwazi Nge-Irritable Bowel Syndrome
5. Ubuhlungu Bokusakazeka Okugcwele Futhi Okugcwele
Uyasazi isenzo semisipha onaso emzimbeni wakho wonke lapho unomkhuhlane? Lokhu kungaqhathaniswa nohlobo lobuhlungu bemisipha abaguli be-fibromyalgia abajwayele kakhulu.
Isici esibonakalayo se-fibromyalgia ukuguquguquka nobuhlungu obuqhubekayo emisipha nasezicubu ezithambile. Lezi zinhlungu zivame ukuchazwa njengobuhlungu obujulile, ubumnene, ukuqina noma ukumisa umzimba wonke - kubandakanya izingalo, imilenze, intamo namahlombe.
Abantu abaningi bakhathazwa kakhulu:
Ubuhlungu obuphansi emuva - obungacasula izinzwa futhi kubangele imisebe emilenzeni.
Ubuhlungu nokushuba entanyeni nasehlombe.
Ubuhlungu phakathi kwamahlombe ehlombe.
Khumbula ukuthi izinhlungu zingashiyana futhi zihambe futhi zishaye izindawo ezahlukahlukene zomzimba. Kubandakanya izingalo nezandla. Esihlokweni esingezansi ungabona izivivinyo eziyisikhombisa ezinhle eziklanyelwe ukusiza nge-osteoarthritis ezandleni zakho.
Funda futhi: - 7 Exercises for Hand Osteoarthritis
6. Ubuhlungu obuhlangene
Ubuhlungu obuhlanganayo nokuqina kukodwa kuyizimpawu ezivame ukubikwa kubantu abane-fibromyalgia. Lokhu kubangelwa, phakathi kokunye, ukushuba nemisipha ebuhlungu ekhawulela ikhono lokuhamba - futhi ngenxa yalokho iqine.
Ngokungafani nokuqaqanjelwa kwamathambo, kuvame ukungabikho kokuvuvukala nokulimala kwamalunga we-fibromyalgia. Le ngenye yezindlela zokuhlukanisa lesi sifo ku-rheumatic arthritis noma i-systemic lupus - lapho ungabona kaningi ukuthi amalunga omuntu aqala ukuvuvukala.
Ngabe ukhathazwa ukuvuvukala rheumatic? Ngezansi ungafunda cishe izindlela eziyisishiyagalombili zokwelashwa kwemvelo - ngaphandle kwemiphumela engemihle.
Funda futhi: - 8 Izindlela Zemvelo Zokulwa Nokuvuvukala Zokulwa Nerheumatism
Ngabe Isikhumba Sakho Sibuhlungu Ngokuthinta? Wake wakuqaphela yini ukuthi ngisho nokukhanya okulula okuvela ezingutsheni noma isenzo somusa kungalimaza ngempela? Lokhu allodynia - uphawu lobuhlungu olumangaza abaningi. Futhi lokho kwenza ukuthi imizamo yokuthambekela okulula kusuka kwabakhethiwe yehlule.
Iningi lichaza i-allodynia njengokuzwela okwengeziwe esikhunjeni okungafaniswa nokushiswa yilanga kakhulu. Ucwaningo lukhombisile ukuthi lokhu kungenxa yokusabela kwe-hypersensitivity ngenxa yokuzwela okuphakathi okuhambisana ne-fibromyalgia. Ngamanye amagama, amasiginali wezinzwa ahunyushwa kabi ebuchosheni futhi umphumela uba - ubuhlungu.
I-Allodynia iyindlela ehlukile yobuhlungu engajwayelekile. Ngaphandle kwe-fibromyalgia, lobuhlungu bubonakala kuphela kuma-neuropathies, shingles kanye ne-migraine.
Funda futhi: 6 Ukuzivocavoca ngokumelene nokubalulekile kwe-Osteoarthritis yeWeleer
Ufuna eminye imininingwane? Joyina leli qembu futhi wabelane ngemininingwane eminye!
Joyina iqembu le-Facebook «I-Rheumatism ne-Chronic Pain - INorway: Ucwaningo nezindaba»(Chofoza lapha) ukuthola izibuyekezo zakamuva ocwaningweni nasekubhaleni abezindaba mayelana nokuphazamiseka kwezifo ezithile futhi ezingelapheki. Lapha, amalungu angathola usizo nokusekelwa - ngazo zonke izikhathi zosuku - ngokushintshana nakho kwabo siqu nezeluleko.
Zizwe ukhululekile ukubhalisa esiteshini sethu (chofoza lapha) - bese ulandela ikhasi lethu ku-FB ukuthola amathiphu ezempilo nsuku zonke nezinhlelo zokuzivocavoca umzimba.
Sithemba ngobuqotho ukuthi le ndatshana ingakusiza ekulweni nobuhlungu obungapheli. Uma lokhu kuyinto oyithandayo kakhulu, ngakho-ke sethemba ukuthi ukhetha ukujoyina umndeni wethu ezinkundleni zokuxhumana futhi wabelana ngale ndaba ngokuqhubekayo.
Nakulokhu, sifuna buza kahle ukuthi wabelane ngale ndatshana kwezokuxhumana noma ngebhulogi yakho (sicela uxhumanise ngqo ne-athikili). Ukuqonda, ulwazi olujwayelekile kanye nokugxila okwandisiwe yizinyathelo zokuqala ezibheke empilweni engcono yansuku zonke kulabo abanezifo ezingapheli zokuxilongwa.
Iziphakamiso zendlela ongasiza ngayo ukulwa nobuhlungu obungapheli:
Ukukhetha A: Yabelana ngqo ku-FB - Kopisha ikheli lewebhusayithi bese ulinamathisela ekhasini lakho le-facebook noma eqenjini elifanele le-facebook oyilungu lalo. Noma cindezela inkinobho "SHARE" ngezansi ukuze uhlanganyele okuthe xaxa ku-facebook yakho.
Thinta lokhu ukuze wabelane ngokuqhubekayo. Ngibonga kakhulu kuwo wonke umuntu obamba iqhaza ekwandiseni ukuqonda okwandayo kwezifo ezingamahlalakhona.
Ukukhetha B: Xhumanisa ngqo nendatshana kubhulogi yakho.
Inketho C: Landela futhi ulingane Ikhasi lethu le-Facebook (chofoza lapha uma ufisa) futhi Isiteshi sethu se-YouTube (chofoza lapha ukuthola amavidiyo wamahhala!)
futhi khumbula ukushiya isilinganiso sezinkanyezi uma uthanda isihloko:
IPHEPHA LOKUQALA: - Lokhu Okufanele Ukwazi Nge-Osteoarthritis Esandleni Sakho
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/de-syv-typene-av-fibromyalgismerter.jpg?media=1648573622 368 700 olimalayo https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 olimalayo2019-03-06 20:14:072021-03-24 13:24:42Izinhlobo ezi-7 zeFibromyalgia Pain
6 Ukuzivocavoca ngokumelene nokubalulekile kwe-Osteoarthritis yeWeleer I-Fibromyalgia nobuhlungu Ekuseni